Andriamifidisoa Zo · Febroary 2011 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Febroary, 2011
Mey 2022 3 Lahatsoratra
Avrily 2022 4 Lahatsoratra
Febroary 2022 10 Lahatsoratra
Janoary 2022 13 Lahatsoratra
Desambra 2021 5 Lahatsoratra
Novambra 2021 15 Lahatsoratra
Oktobra 2021 9 Lahatsoratra
Septambra 2021 7 Lahatsoratra
Aogositra 2021 13 Lahatsoratra
Jolay 2021 4 Lahatsoratra
Mey 2021 4 Lahatsoratra
Marsa 2021 5 Lahatsoratra
Febroary 2021 7 Lahatsoratra
Janoary 2021 7 Lahatsoratra
Desambra 2020 9 Lahatsoratra
Novambra 2020 7 Lahatsoratra
Septambra 2020 8 Lahatsoratra
Aogositra 2020 8 Lahatsoratra
Jolay 2020 9 Lahatsoratra
Mey 2020 9 Lahatsoratra
Avrily 2020 6 Lahatsoratra
Marsa 2020 9 Lahatsoratra
Febroary 2020 4 Lahatsoratra
Oktobra 2019 8 Lahatsoratra
Aogositra 2019 8 Lahatsoratra
Jona 2019 6 Lahatsoratra
Mey 2019 16 Lahatsoratra
Avrily 2019 13 Lahatsoratra
Marsa 2019 12 Lahatsoratra
Febroary 2019 10 Lahatsoratra
Janoary 2019 13 Lahatsoratra
Novambra 2018 7 Lahatsoratra
Oktobra 2018 2 Lahatsoratra
Aogositra 2018 11 Lahatsoratra
Jona 2018 14 Lahatsoratra
Mey 2018 14 Lahatsoratra
Avrily 2018 19 Lahatsoratra
Desambra 2017 1 Lahatsoratra
Septambra 2017 6 Lahatsoratra
Jolay 2017 4 Lahatsoratra
Mey 2017 7 Lahatsoratra
Janoary 2017 5 Lahatsoratra
Desambra 2016 5 Lahatsoratra
Novambra 2016 13 Lahatsoratra
Oktobra 2016 6 Lahatsoratra
Septambra 2016 4 Lahatsoratra
Jolay 2016 11 Lahatsoratra
Marsa 2016 18 Lahatsoratra
Febroary 2016 22 Lahatsoratra
Janoary 2016 18 Lahatsoratra
Desambra 2015 22 Lahatsoratra
Novambra 2015 16 Lahatsoratra
Oktobra 2015 12 Lahatsoratra
Septambra 2015 21 Lahatsoratra
Aogositra 2015 25 Lahatsoratra
Avrily 2015 12 Lahatsoratra
Janoary 2015 14 Lahatsoratra
Desambra 2014 20 Lahatsoratra
Jolay 2014 21 Lahatsoratra
Jona 2014 14 Lahatsoratra
Marsa 2014 17 Lahatsoratra
Febroary 2014 23 Lahatsoratra
Janoary 2014 32 Lahatsoratra
Desambra 2013 21 Lahatsoratra
Oktobra 2013 12 Lahatsoratra
Aogositra 2013 19 Lahatsoratra
Jona 2013 22 Lahatsoratra
Mey 2013 22 Lahatsoratra
Avrily 2013 26 Lahatsoratra
Marsa 2013 18 Lahatsoratra
Janoary 2013 23 Lahatsoratra
Desambra 2012 41 Lahatsoratra
Oktobra 2012 20 Lahatsoratra
Septambra 2012 14 Lahatsoratra
Aogositra 2012 13 Lahatsoratra
Jolay 2012 13 Lahatsoratra
Jona 2012 6 Lahatsoratra
Mey 2012 23 Lahatsoratra
Avrily 2012 23 Lahatsoratra
Febroary 2012 16 Lahatsoratra
Janoary 2012 18 Lahatsoratra
Novambra 2011 9 Lahatsoratra
Oktobra 2011 28 Lahatsoratra
Septambra 2011 23 Lahatsoratra
Jolay 2011 7 Lahatsoratra
Jona 2011 18 Lahatsoratra
Avrily 2011 11 Lahatsoratra
Marsa 2011 23 Lahatsoratra
Febroary 2011 7 Lahatsoratra
Janoary 2011 6 Lahatsoratra
Desambra 2010 3 Lahatsoratra
Novambra 2010 14 Lahatsoratra
Oktobra 2010 21 Lahatsoratra
Jolay 2010 4 Lahatsoratra
Mey 2010 4 Lahatsoratra
Avrily 2010 11 Lahatsoratra
Marsa 2010 29 Lahatsoratra
Febroary 2010 26 Lahatsoratra
Janoary 2010 9 Lahatsoratra
Desambra 2009 8 Lahatsoratra
Novambra 2009 9 Lahatsoratra
Oktobra 2009 16 Lahatsoratra
Septambra 2009 13 Lahatsoratra
Aogositra 2009 21 Lahatsoratra
Mey 2009 31 Lahatsoratra
Janoary 2009 35 Lahatsoratra
Desambra 2008 75 Lahatsoratra
Novambra 2008 12 Lahatsoratra
Oktobra 2008 34 Lahatsoratra
Septambra 2008 37 Lahatsoratra
Aogositra 2008 36 Lahatsoratra
Jolay 2008 70 Lahatsoratra
Jona 2008 12 Lahatsoratra
Mey 2008 22 Lahatsoratra
Avrily 2008 61 Lahatsoratra
Marsa 2008 31 Lahatsoratra
Febroary 2008 5 Lahatsoratra
Janoary 2008 131 Lahatsoratra
Desambra 2007 28 Lahatsoratra
Novambra 2007 24 Lahatsoratra
Oktobra 2007 22 Lahatsoratra
Septambra 2007 15 Lahatsoratra
Translation Editor · Nanomboka nandika tamin'ny 11 Septambra 2007 · 2660 Lahatsoratra
Bilaogera amin'ny fiteny malagasy. Teraka sy mipetraka eto Madagasikara. Miezaka mampahafantatra araka izy azo atao ny zavamisy eto an-toerana ho an'ny mahay teny malagasy rehetra sy ireo miezaka hahay ny teny malagasy ihany koa.
Marihina fa tsy mpanao gazety aho ary tsy miasa anatina sampan-draharaham-pampahalalam-baovao ihany koa. Fitiavana hampiroborobo ny teny malagasy no tanjoko etoana na dia misy dia misy tokoa aza ny zavatra tsy itovizako hevitra amin'ny lahatsoratra adikako.
imailaka Andriamifidisoa Zo
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Febroary, 2011
Libya: Tahotra sy korontana ao an-tseranam-piaramanidin'i Tripoli
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 28 Febroary 2011
Tahotra, korontana, tebiteby ary hakivina - nampiasaina hitantarana ny zava-manjaka ao an-tseranam-piaramanidin'ny renivohitra Libyana nandritra ny andro faramparany avokoa ireo voambolana ireo. Tafiditra anatin'ny tsy fahafantarana izay ho avy i Libya hatramin'ny nisian'ny fitroarana hikomy amin'ny mpitondra ity firenena iray ity, dia ny fikomiana amin'ny Kolonely Muammar Al Gaddafi ny alin'ny 16 Febroary 2011 (#Feb17) .
Myanmar: Barcamp Yangon 2011
Azia Atsinanana 25 Febroary 2011
Mihoatra ny 4000 ny mpandray anjara nanatrika ny Barcamp Yangon 2011 tany Myanmar izay nametraka ity fotoana ity ho iray amin'ny Barcamp nahavory olona be indrindra tany amin'iny faritra iny. Voarara ny vohikala Xanga rehefa niresaka momba ny sivana an-tserasera ny Myanmar ny mpandray anjara iray (izay ampiantranoan'i Xanga ny bolongany).
Libya: “Roso toy tsa mimpody intsony”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 24 Febroary 2011
Mety ho ora sisa no isaina amin'ny fitondran'i Muammar Al Gaddafi. Saingy rehefa nandrahona ny hamono ny mpanao fihetsiketsehana sy ny miaramila mihaika ny fitondrany izy dia mamparary an-doha ny ora sisa andrasana. Any amin'ny toerana tsy eo ambany fifehezan'i Gaddafi intsony dia efa manomboka manangona tahirin-kevitra momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny olona.
Koety: Mitaky ny zony ny ‘Bedoun’ tsy manan-tanindrazana
Miditra amin'ny andro fahatelo ny fihetsiketseham-panoherana ataon'ny mponina koesiana tsy manan-tanindrazana, fantatra ihany koa ho 'bedoun' (tsy manana zom-pirenena), mitady ny fampitovian-jo sy fizakana zom-pirenena izay nahaterahan'ny maro sady heveriny ho fonenany tokana. Ny fitondrana moa milaza fa tsy mponina ara-dalàna izy ireo - ary tsy ara-dalàna ihany koa ny fihetsiketsehany.
Iran: VOA nosovohan'ny “Cyber Army”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 23 Febroary 2011
Nosovohan'ny [no-pirate-n'ny] “Cyber Army” [Tafika an-tseraseran'i] Iran ny tranonkalan'i Voice of America androany [talata] ka nametrahany hafatra ho an'i Hilary Clinton: “Rtoa. Clinton, Tianao ho heno ve ny feon'ny firenena voatsindry? Tsy ho voafitak'i Etazonia intsony ny firenena silamo, ary tianay ianao hampitsahatra ny fitsabahanao any amin'ny firenena silamo.”
Libya: Inona no nahatara an'i Gaddafi?
Ity lahatsoratra ity dia anisan'ny fitantarana manokana ataonay momba ny Fitroarana 2011 any Libya. Miteny ao amin'ny fahitalavi-panjakana ankehitriny ny mpanao didy jadona ao Libya Muammar Al Gaddafi. Mandra-piandry ny kabariny dia niezaka ny hamantatra ny antony nahatara ny kabary efa niomanana ny tweeple avy amin'ireto angona tweets na sioka...
Libya: Fahafatesana mialoha ny Fahafahana (Lahatsary)
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 22 Febroary 2011
Ity lahatsoratra ity dia anisan'ny fitantarana manokana ataonay momba ny Fitroarana 2011 any Libya. Ao anatin'ny toe-draharaha mampidi-doza sady miova haingana dia haingana ao an-toerana – sy amin'ny alalan'ny serasera nomerika tsy dia tsara loatra – no anombohan'ny mponina any Libya mamoaka saripika sy lahatsarin'ny fitroarana manohitra an'i Muammar Al...